नीधि कसका उम्मेदवार ? - Sankalpa Khabar
2. रामचन्द्रको छटपटी : कांग्रेसमा ट्रम्प प्रवृत्ति देखियाे
4. मेरा पिकमा फसेका पाँच आरोही तथा पदप्रदर्शकको उद्धार
5. आज पनि तीन प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना
6. सुदूरपश्चिममा बाढी, पहिराबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३३ पुग्यो, २२ बेपत्ता
नीधि कसका उम्मेदवार ?
२६ भाद्र १०:२०
काठमाण्डौं । के दुइ दशक देखि शेरवहादुर देउवासंग संगै रहेका महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्र नीधिले कांग्रेस पार्टीको सभापति जित्छु भनेरै १४ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन ? सभापतिको उम्मेदवार वनेका मध्ये सवैभन्दा पहिले वानेश्वरको महंगो र सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसलाइ सम्पर्क कार्यालय वनाएका नेता निधिको वारेमा अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवासंग अलग भएर सोही क्याम्पबाट अधिवेशन लडछु भनेपछि दुइ पटक दिल्लि पुगिसकेका निधि हतारमा देखिन्छन । देउवासंग अलग हुने वित्तिकै कांग्रेसका संस्थापक नेताहरु वीपीपुत्र डा.शशांक,गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह संग उनले धेरै चरणमा सम्वाद पनि गरिसकेका छन । सामुहिक तस्वीर सामुहिक भोज पनि गरिसकेका छन । सकभर तिन राजकुमारको एकल उम्मेदवार तय गर्ने उनको चाहना पनि प्रकट भइरहेकै छ । र,सभापति देउवाले डाकेको गुटगत भेलामा वुढानिलकण्ठ पनि पुगेका छन । र,सवैभन्दा पहिला सम्पर्क कार्यालय पनि उनैले खोलेका छन । यसका वाजुद पनि प्रश्न उनैमाथि छ । र,भनिदैछ–के उनी यो रेशका जित्ने घोडा हुन ?
कांग्रेसजनलाइ राम्रोसंग हेक्का छ–निधि यसपटक अधिवेशन जित्दैनन । यो कुरा अरु त अरु स्वयम निधिलाइ पनि थाह छ । तैपनि उनी किन मच्चिएका छन । यसमा दुइथरि कुरा छ ।
एकथरि भन्छन–निधिले महाधिवेशनको अन्तिम समयमा देउवासंग सहमति गरेर पछि हटछन ।
अर्कोथरि भन्छन–निधि उठछन,हार्छन र यसैको माध्यमबाट एउटा अलग गुट वनाएर अर्को महाधिवेशनको लागि ठाउ सुरक्षित गर्छन ।
सवैका आ–आफना आंकलन र मुल्यांकन छन उनका प्रति । तर,खासमा निधि स्वयम चाहिं के गर्छन ? सवाल यो हो । नीधिको खास नीति देउवलाइ गलाउने हो । उनी सकभर देउवालाइ कमजोर देखाउने र ब्याक गराउने मुडमा देखिन्छन । यसो भएमा संस्थापन पक्षकै उम्मेदवार आफु हुन सकिने उनको योजना छ । यसको लागि भारतको सदाशयता लिनकै लागि उनी दिल्लि दौडमा छन । र,यति गर्दा पनि देउवा पछि नहटे चुनाव लडने र गुट स्थापित गर्ने दौडमा छन । किनभने यो पटक उनले गुट वनाएनन भने अर्को महाधिवेशनमा डा.शेखर वा प्रकाशमान सिंह वा संस्थापनकै अर्को उम्मेदवारले उछिन्नेछन र कहिल्यै पनि सभापति हुन पाउने छैन भन्ने विश्लेषणमा देखिन्छन । खासमा भन्ने हो भने निधि अस्तित्व रक्षाको दौडमा छन । तर,के नीधिको उम्मेदवारीले देउवा पछि हटछन । यो प्रश्न कमजोर किन देखिन्छ भने आजको मिति पनि देउवा सवैभन्दा वलिया उम्मेदवार हुन ।
रामचन्द्र पौडेल समुहमा स्वयम रामचन्द्र पौडेल देउवाको कारण नभइ उनकै टिमका सदस्यले नेता नमानेर हैरान छन । पौडेल समुका नेता पौडेल होइनन । यस समुहमा उनी वाहेक सवै नेता हुन । यदि उनीहरुले पौडेललाइ नेता मानेको भए शशांक,शेखर देखि कल्याण गुरुङ्गसम्म कसरी सभापतिको उम्मेदवार भए ? यो भनेको रामचन्द्र पौडेलको असक्षमता हो । र,यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु देउवाको सक्षमता हो । यस्तो सुन्दर अवस्था भएको बेलामा देउवा कसरी ब्याक हुन्छन ? यसैले आजपनि पौडेल समुह महाधिवेशन चाहदैन । किनभने यसैपनि भारी देउवा अहिले प्रधानमन्त्री समेत भएपछि झन भारी भएका छन ।
तर,जसोतसो समुह जोगाउन र अस्तित्व जोगाउन निधि मैदानमा देखिएका छन । नत्र रामचन्द्र पौडेल वा ढुण्डीराज शास्त्रीको हालत हुने उनले देखिसकेका छन तर उनले भुलेको एउटा कुरा छ–कांग्रेसमा मधेशी नेता महामन्त्री देखि कोषाध्यक्षसम्म भएका छन तर सभापति भएका छैनन ।
अझ महत्वपुर्ण कुरा चाहिं उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन कि भारतको ? जसरी उनले जोगी,वावा,सन्त,महन्थ राखेर सम्पर्क कार्यालय उदघाटन गरे यसैबाट वुझन सकिन्छ कि उनी भारतसंग लाइन मिलाइरहेका छन भनेर । र,देउवासंग भारत रुष्ट हुनु र निधि अलग उम्मेदवार हुनु संयोग मात्र हो कि नियोजित ?
४ कार्तिक १९:०८
५ कार्तिक १६:०१
प्रधानमन्त्री देउवा सुदूरपश्चिममा, बझाङको प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण
४ कार्तिक १४:११
मेटमणिले भने-केपी ओली झापाबाटै पराजित हुन्छन
१ कार्तिक १८:१४
४ कार्तिक १४:१९
पूर्वन्यायाधीश फोरमले माग्यो प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा
५ कार्तिक १७:३१
बेमौसमी वर्षाका कारण तीन प्रदेशमा मात्रै ७ अर्ब २२…
५ कार्तिक १७:११
बाढीपहिरो र डुबानमा परी एक सय १२ जनाको मृत्यु,…
५ कार्तिक १७:०३